ရင်ငြိမ်းပန်း ကရုဏာ ဖောင်ဒေးရှင်း: November 2007
Yin Nyein Pann Foundation Nadee road, Moo 4, Mahachai, Samutsakhon, Thailand email: yinnyeinpannfoundation@gmail.com Ph: (66) 087 4146 521 (U Kyaw Lwin, President) Ph: (66) 086 8915 803(U Toe, Vice President)
ခရိုင်မှူး. နောက်ဆုံးထုတ် အမိန့်အပေါ်ထင်မြင်ချက်များ
ခရိုင်မှူးလက်မှတ်ပါ ၂၆/၁၀/၀၇ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန် ထားသောအမိန့်ကြော်ငြာတွင် မြန်မာ အပါအ၀င် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား များသည် စမွတ်စာခွန် ခရိုင် မဟာချိုင် ဒေသတွင် မြောက် များ စွာ ရောက်ရှိ နေပြီး ထို လူများထဲ တွင်လည်း အလုပ်လုပ်ခွင့် လက်မှတ် (ဘတ်) ရှိသူရော မရှိ သူပါ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်သား များစွာ ရပ်ကွက် များတွင် ပျံ့နှံ့ နေထိုင်နေ ကြပါသည်၊ ထိုသို့ နေထိုင် မှုကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာ အကျိုးဆက်အဖြစ် ကျန်းမာရေး။ နိုင်ငံမဲ့ ကလေးများ။ ဒုစရိုက် မှုခင်းများ။ ဥပဒေ ချိုးဖေါက်မှု များအပြင် ယခုနောက်ဆုံး ရိုးရာယဉ် ကျေးမှု ပွဲတော်များ ကျင်းပ ပြုလုပ် နေကြပြီး သူတို. ယဉ်ကျေးမှု များကို ဖြန့်ဖြူး နေကြ ပါသည်၊ထိုအချက် များမှာ နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်ရေးနှင့် အစိုးရ. ငဲ့ညှာ ထောက်ထားသော အားဖြင့် ခေတ္တခဏ နေထိုင် လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးထားခြင်း ရည်ရွယ်ချက် ကိုလည်း ထိခိုက် စေပါသည်၊
ထို့ကြောင့် အလုပ်ရှင်များ။ အလုပ်ရုံများ အားလုံးသည် မိမိတို့ တာဝန်ယူ ထားသော နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ အပြုအမူများကို ဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီစွာ လိုက်နာရန် ထိန်းချုပ် တင်းကျပ် ထားရမည်၊ ကျူးလွန် ချိုးဖေါက်ပါက ဥပဒေအရ ပြတ်သားစွာ အရေးယူခြင်း ခံရမည်၊ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ မည်သည့် အထိမ်းအမှတ် ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ပွဲတော် ကိုမှ ဖြန့်ဖြူး ကျင်းပခွင့် ပေးမည် မဟုတ်ပါ၊
အထက်ပါ စာစုမှာ စမွတ်စာခွန် ခရိုင်မှူး အမိန့်ကြော်ငြာစာကို မြန်မာဘာသာဖြင့် အနီးစပ် ဆုံးဖြစ်အောင် ဘာသာ ပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊ ထိုစာပါအချက်များနှင့် မြန်မာ အလုပ်သမား နှင့် ဆိုင်သော အခြား အချက်များကို အလုပ်သမား တစ်ဦး အနေဖြင့် ခွဲခြား တင်ပြ သွားပါမယ်၊ ပထမဆုံး မြန်မာနိုင်ငံသားများ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ၀င်ရောက် အလုပ် လုပ်ကိုင် ခဲ့တာကို ပြန်ပြီး ကြည့်ရအောင်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ အဆင်မပြေ မှုပေါင်း များစွာကြောင့် ရှေးဦးစွာ ထိုင်းနဲ့ နယ်မြေချင်း နီးစပ်နေတဲ့ မွန်။ ကရင်။ ထားဝယ်။ ရှမ်း အစ ရှိတဲ့ ဒေသ များက အချို့ တွေဟာ လွန် ခဲ့တဲ့ ၁၅နှစ်ကျော် ကာလတွေမှာ ၀င်ရောက် အလုပ် လုပ်ကိုင် ခဲ့ကြ ပါတယ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ဟာလည်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် နေတဲ့ အချိန် ကာလ ဖြစ်တာကြောင့် ရေလုပ်ငန်း။ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း တွေမှာ လူ အင်အား များစွာ လိုနေချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်ပြီး အလုပ်တွေအဆင်ပြေခဲ့ကြပါတယ်၊ ဒီထဲက အဆင်မပြေမှုတွေ။ အလိမ်ခံ။အနှိမ်ခံခဲ့ရတာတွေကို မပြောတော့ပဲ ခြုံငုံပြီးဆက်ပြောသွားပါမယ်၊ အဲဒီနောက်မှာတော့ အထက် ဖေါ်ပြပါ မွန်။ကရင် အစရှိတဲ့ဒေသတွေကနေ လူပေါင်း သိန်း ဂဏန်းနဲ့ ချီပြီး အလုပ်သမားတွေ တဖြေးဖြေးဝင် ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်၊ အဲဒါကလည်း အလုပ်သမားလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို တော့ ထိုင်းလူမျိုးအများစုဟာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပြီး လုပ်အားခနည်းတဲ့အလုပ်တွေကို မလုပ်ကြတော့ပဲ သန့်ရှင်း။ သက်သာ။ ပေါ့ပါးတဲ့ အလုပ်တွေကို ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်၊
ကျန်းမာရေးအကြောင်းကိုပြောရရင်တော့ ဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုလာကြတဲ့လူတွေဟာ အလုပ်ကြမ်း တွေ လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိပြီးသားပါ၊ ဒါကြောင့်မကျန်းမာတွေလူတွေ မလာကြပါဘူး၊ ဒါ့အပြင် လာရတဲ့ခရီးလမ်းတွေဟာ လဲ ကြမ်းတမ်းခက်ခဲပြီး တောတောင်တွေဖြတ်။ နယ်စပ်ကနေ ကားထဲကြပ် ပိတ်သိပ်ပြီး လာခဲ့ကြရပါတယ်၊ တ ချို့လူတွေဆိုရင် လမ်းခရီးထဲမှာပဲ အသက်ဆုံးရှုံး ခဲ့ရပါတယ်၊ ဒါကြောင့် မကျန်းမာတဲ့ရောဂါသည်မျိုးဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံထဲရောက်ဖို့ အလွန်ခက်ခဲ လှပါတယ်၊ ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ ထဲကို တီဘီ။ငှက်ဖျား။ ဆင်ခြေထောက် အစရှိတဲ့ရောဂါတွေသယ်ဆောင်လာပါတယ်လို့ အစိုးရအဆက်ဆက် စွပ်စွဲ ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်၊
ကောင်းပြီ။ ဘာကြောင့်မြန်မာအလုပ်သမားတွေမှာ ဒီကူးစက်ရောဂါတွေ တွေ့ကြရပါသလဲ၊ အရင်ဆုံး မြန်မာတွေ ၀င်ရောက်ခဲ့ရပုံတွေကိုပြန်ကြည့်ကြရအောင်၊ မြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာ နယ်စပ်ကတော တောင်တွေကို နေ့ညမရွေး လမ်းလျှောက်လာခဲ့ရပါတယ်၊ ဒါ့အပြင် လမ်းကြောင်း မှာ အခြေအနေမကောင်းရင် နှစ်ရက် ကနေ တစ်လ လောက်အထိကြာအောင် တောထဲမှာပဲနေ ရရာစားသောက်ပြီးနေခဲ့ကြရပါတယ်၊ အဲဒီ အချိန်အခါတွေဟာ ငှက်ဖျား အစရှိတဲ့ရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်ခံရဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်အခါတွေပါပဲ၊ ထိုင်းနိုင် ငံအထဲကို ရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အခန်းတွေ။ အိမ်တွေမှာ နေထိုင်ခွင့်ရပြီး အစာ အဟာရကောင်းတွေ စားသောက်ရရင်တော့ ကျန်းမာစွာနဲ့ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်မှာပါ၊ သို့သော် ကြပ်ပိတ် ပြီး လေ၀င်လေထွက်မရှိတဲ့နေရာ အလုပ်ကြမ်းပြီး နားချိန်နည်းတဲ့အလုပ်တွေ စာနာစိတ်နည်းတဲ့ အလုပ်ရှင်။ ပွဲစားတွေနဲ့ဆုံပြီး အလုပ်မတရားခိုင်းခံထိပြီဆိုရင်တော့ အဲဒီအလုပ်သမားအနေနဲ့ ရောဂါတွေရတော့မှာပေါ့၊
ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ဖို့ဆိုတာကလဲ အလုပ်ရှင်အပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေပါသေးတယ်၊ ထားပါတော့ ဒီနေရာမှာ အကျယ်ချဲ့နေရင် စာမျက်နှာတွေတိုးသွားနိုင်တယ်။ နောက်မှပဲ ဒီအကြောင်းကိုထပ်တင်ပြသွားပါ မယ်၊ မြန်မာတွေကသယ်ဆောင်လာတဲ့ ရောဂါဆိုတာတွေဟာ ဆေးကုသလို့ရပါသေးတယ်၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ကိုများစွာထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ပါဘူး၊ ဒီစမွတ်စာခွန် ခရိုင်(မဟာချိုင်)မှာဆိုရင် ငှက်ဖျားရောဂါပိုးကူးစေတတ်တဲ့ ခြင် လုံးဝလုံးဝမရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံကနေ မြန်မာအလုပ်သမားတွေဆီကို ကူးစက်ခံလိုက်ရတဲ့ အိတ်ခ်ျအိုင် ဗွီအေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါကတော့ ကုရာနတ္ထိဆေးမရှိ ပဲ၊ ဘယ်သူတွေကပိုပြီးနစ်နာလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ နောက်ထပ် ပြောချင်တာက အဲဒီအေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါကို ထိုင်းနိုင်ငံထဲသယ်လာတဲ့ ဥရောပ။အမေရိကနိုင်ငံ တွေကိုတော့ ဘယ်ထိုင်းအစိုးရကမှ အပြစ်ပြောသံမကြားရသေးဘူး၊ မပြောရဲတာပဲလား။ ကျုပ်ရဲ့ဗဟုသုတ နည်းတာလားတော့မသိဘူးဗျို့၊
ကဲဒုစရိုက်မှုတွေ။ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေဘက်ကိုလှည့်ကြရအောင်၊ ကျုပ်တို့ မဟာချိုင်မှာ ထိုင်းတွေရဲ့လု ယက်စော်ကားမှုတွေပဲ မြန်မာတွေက နေ့စဉ်နဲ့အမျှခံနေကြရတာပါ၊ မြန်မာတွေက ထိုင်းတွေကို လုယက်စော်ကားဖို့ဆိုတာ မရှိသလောက်နည်းပါတယ်၊ ရာဇ၀တ်မှတ်တမ်းတွေမှာလဲ ပြန်ရှာကြည့်ပါ၊ အထူးသဖြင့် မြန် မာတွေက အိမ်ရှင်နိုင်ငံသားနဲ့ ဘယ်တော့မှ ရန်ပြိုင်ဖြစ်ဖို့ မပြုလုပ်ခဲ့ပါဘူး၊ နိုင်ငံတကာဘော်လုံးပွဲတွေမှာ တောင် အိမ်ရှင်။ဧည့်သည် ယှဉ်လို့မရပါဘူး၊ မြန်မာအချင်းချင်းသာ ရန်ဖြစ်မှုတွေ။ သတ်ဖြတ်မှု တွေရှိပါတယ်၊ နောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ သားတွေဟာ အလုပ်လာလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်ပြတ်ပြတ်သားသားရှိပြီးသားပါ၊ ဒါ ကြောင့် ယုတ္တိ မရှိတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေကို ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါပြီ၊ မူးယစ်ဆေးဆိုရင်လည်း အဓိကဖြစ်တဲ့ ယာဘ ခေါ် မြင်းဆေးခေါ် စိတ်ကြွဆေးတွေ ပျံ့နှံ့နေရတာ မြန်မာ ပြည်သားကြောင့် လို့ ပြောဖို့ ခက်ပါတယ်၊ မြန်မာပြည်သားတွေဟာ အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်(ဘတ်)ရှိတဲ့သူတွေတောင်မှ ထိုင်း နိုင်ငံ အနှံ့အပြား ခရီးသွားလာခွင့်မရှိ ပါဘူး၊ မြန်မာတွေကြောင့်လို့ပြောရင် ယုတ္တိမရှိပဲ အရမ်း ကာရော စွပ်စွဲမှုတွေသာဖြစ်ပါတယ်၊
နောက်တစ်ခုအဆိုးဆုံးက ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ပက်သတ်ပြီး စွပ်စွဲပြောဆို ထား တာ တွေဖြစ်ပါတယ်၊ မြန်မာတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှု။ ထိုင်းတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှု အားလုံးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို အခြေခံပြီး ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ် ပါတယ်၊ သေသေချာချာ ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရင် အားလုံးနီးပါး တူညီနေပါတယ်၊ မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ စုပေါင်းကျင်းပတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော် တွေဟာ ဘာတွေလဲ၊ နှစ်ကူးသင်္ကြန်ပွဲ။ ၀ါဆိုပွဲ။ ၀ါကျွတ်ပွဲ။ ကထိန်ပွဲ ဒါတွေပဲရှိပါတယ်၊ အဲဒီ ပွဲတွေအားလုံး ထိုင်းရိုးရာယဉ်ကျေးမှုမှာကိုက ရှိပြီးသားတွေပါ၊မြန်မာပြည် သား သိန်းဂဏန်း နဲ့ရှိ နေ တဲ့ ဒီမဟာချိုင်မှာ ကုသိုလ်ရေး ပွဲတော်တွေ ကျင်းပ ပြုလုပ်တာ ကောင်းသလား။ ဆိုးသ လား၊ နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေး ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ၊ သေချာတာကတော့ အလှူပွဲ တွေကို ပိတ်ပင်တယ်ဆိုတာကတော့ လူ့ယဉ်ကျေးမှုအရကို တော်တော်လေးဆိုးနေပါပြီ၊ ဘာသာ ရေး ရှုဒေါင့်ကနေ ကြည့်ရင်တော့ မတွေးရဲစရာပါပဲ၊ သြော် သန်းရွှေလိုလူမျိုး ထိုင်းမှာလည်း ရှိသေး ပါလားလို့ အံ့သြမိပါတယ်၊ နောက်တစ်ခုက ကိုးကွယ်မှုချင်း။ ယဉ်ကျေးမှုချင်း မတူညီတဲ့ တရုတ် ရိုးရာပွဲတွေ။ ဥရောပရိုးရာ ဟော်လိုဝင်းခေါ် တစ္ဆေပွဲတွေ အစရှိသဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့လုပ်နေပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းပိတ်ပင်မှုဟာလည်း ဆက်ပြောဖို့ ကို မပြောချင်တော့ပါဘူးလေ၊
အားလုံးကိုခြုံငုံပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်ရင်တော့ ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ရှိနေ ရတာဟာ ထိုင်းစီးပွါးရေးအတွက် အဓိကအချက်ထဲမှာပါပါတယ်၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပြန်အလှန် အ ကျိုး ရှိတယ် ဆိုတာကို ရဲရဲလက်ခံနိုင်ရ ပါမယ်၊ သေသေချာချာတွက်ရင် ထိုင်းနိုင်ငံက ပိုပြီးအကျိုး အမြတ် ရပါတယ်၊ ဒါကိုလစ်လျူရှုပြီး မြန်မာအလုပ် သမားတွေကို တစ်ဖက်သတ်ဖိနှိပ်မယ်ဆိုရင် နောင်အနာဂတ်မှာ ဆိုးကျိုးတွေများစွာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် မြန်မာအလုပ်သမားတွေ အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ ဘာသာရေးပွဲတော်တွေ ပိတ်ပင်ခြင်းဟာ ဘယ်လို မှလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လူသားဆန်တဲ့ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူတော်လူ ကောင်းတွေ အများကြီးပါပဲ၊ ထိုင်းနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်က ဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီး မြန်မာအလုပ် သမားပြသနာတွေဖြေရှင်းဖို့ ပြောကြားသွားပါတယ်၊ ၂၉/၁၀/၂၀၀၇ ရက်စွဲနဲ့ နယ်အိုန အမည်ရ သတင်း ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှာရှိပါတယ်၊ လိပ်စာကိုအောက်မှာဖေါ်ပြသွားပါမယ်၊ အဲဒီလို ထိုင်းလူယဉ်ကျေး တွေရဲ့ လေးစား ဖွယ်ရာတွေကိုထောက်ထားပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် မပြောတော့ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ထိုင်းလူမျိုးများ အလေးထားပြီး စဉ်းစားစေချင်တာကတော့ မြန်မာ။လော။ကမ်ပူးချား ဗုဒ္ဓဘာသာ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံသားတွေနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ ပြေ ပြစ်မှုတွေ လျော့နည်းနေတာ ဘာကြောာင့်လဲ။ ဘာတွေ ပြင်ဆင်သင့်သလဲ ဆိုတာတွေပါ၊ အနာဂတ်ကာလမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင် သွားဖို့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း တင်ပြရင်းနဲ့ ခေတ္တရပ် နားပါဦးမယ်၊ ထိုင်းယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးပြောကြားချက်သတင်းပါတဲ့လိပ်စာကတော့
Posted by YinNyeinPannFoundation at 10:43 AM No comments:
မြင့်မြတ် ဖြူစင်သော ကရုဏာရှင် အင်အားစု များကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ ရင်ငြိမ်းပန်း ကရုဏာ ဖောင်ဒေးရှင်း ကို ဖွဲ့စည်း တည်ထောင် ထားသည်မှာ ၂၀၀၄ ဇန်န၀ါရီ ၁၀ရက်မှ ယနေ့တိုင် ဆိုလျှင် သုံးနှစ် ကျော်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဖြတ်သန်း ခဲ့သော သုံးနှစ် ကျော်ကြာ ခရီးတွင် ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာ လုပ်သား များ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် နာရေး ကူညီမှု များကို အဓိကထား ကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါသည်။ လူသား တိုင်းတွင် ရှိရင်းစွဲ သနား ကြင်နာ တတ်သော ကရုဏာ နှလုံးသားမှ ယိုဖိတ် စီးဆင်း လာသော တစ်ဘတ် ပေါင်းစုသော မြင့်မြတ်သော ငွေကြေး တို့ဖြင့် ကူညီ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် နှစ်စဉ် မပျက် လှူဒါန်း ကူညီ အားပေး ကြသော စေတနာရှင်များ တရက်၊ တလ၊ တနှစ် လှူဒါန်းပြီး အကြောင်း မညီညွတ်၍ ထွက်သွား ကြသော စေတနာရှင်များ အားလုံးကို ဆင်းရဲ ဒုက္ခ ရောက်ပြီး၊ ရောက်နေဆဲ ဘ၀တူ အလုပ်သမား များမှ ကမ္ဘာ့ လူသားများ အားလုံးနှင့် ထပ်တူထပ်မျှ လေးစား ဦးညွတ်လျက် ကျေးဇူး တသသ အထူး တင်အပ် ပါသည်။
အသင်း၏ ယနေ့ ရပ်တည် ရှင်သန် နေရသော အင်အားသည် အသင်းဝင် ဦးရေ ၂၀၀ ကျော်မျှသာ ရှိသော အင်အားဖြင့် ပရဟိတ လုပ်ငန်း များကို ကြံ့ကြံ့ခံ ကူညီ နေရသည့် ကာလ ဖြစ်ပါသည်။ ကူညီ လိုက်ရ၍ ရရှိ လာသော ပီတိထက် မကူညီ လိုက်ရ၍ လက်ပိုက် နောက်ဆုတ် လိုက်ရသော စိတ်မချမ်းသာမှုက ပိုများ နေပါသည်။
ဤ ကရုဏာ ရာသက်ပန် အသင်းဝင် များသည်လည်း ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်နေသည့် လူသား အားလုံး၏ မျက်နှာ တစ်ခု ကိုသာ ကြည့်၍ ရန်သူ မိတ်ဆွေ မရွေး၊ လူမျိုး ဘာသာ မရွေး၊ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ မရွေး ရှေ့ဆက် ကူညီ လှူဒါန်း သွားရန် သံဓိဌာန် ချထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ယခုနှစ်တွင် ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ ရမည့် အကူအညီ လိုအပ်မှု များကိုလည်း အရှိန်အဟုန် မပျက် ဆက်လက် ကူညီ ဆောင်ရွက် သွားရန် ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံး အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် လက်တွဲ ပါဝင်ကူညီ ကြပါရန် ဘ၀တူ အလုပ်သမား လူသားများ အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့် အသင်း အဖွဲ့ များ၏ လက်အောက်ခံ ဆက်နွှယ်ခံမှ မဟုတ်ဘဲ ဘ၀တူ ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာ အလုပ်သမား များဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်း ထားသော အသင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျန်သည် အထိ လောက ကောင်းကျိုး အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ရင်ငြိမ်းပန်း ကလေးများ ကတော့ ဖူးပွင့် လန်းဆန်းလျက် သင်းပျံ့ မွှေးမြသော ရနံ့တို့ကို ဖြန့်ဝေ ပေးနေ မည်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါ တော့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ နှလုံးသားထဲတွင် ထုထည် ကြီးမားစွာဖြင့် ကိန်းအောင်း နေသော မေတ္တာ ကရုဏာကို အမြင့်မြတ်ဆုံး ဒါန အဖြစ် မွန်းကြပ် နေသော ဘ၀တူ အလုပ်သမား များ၏ အခက်အခဲ၊ ပြည်တွင်းမှ ကျန်ရစ် ခဲ့သော ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘွားတို့၏ ဘ၀၊ မိဘ ခေါ်စရာ မရှိသော ရင်သွေးငယ် တို့၏ အနာဂတ်၊ သေလွန် သွားပြီး ပျဉ်တစ်ချပ် ကုန်းကောက် စရာ မရှိသော ဈာပန၊ စသည့် လိုအပ်ချက် များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ချွေးနှဲစာ များထဲမှ တနေ့လျှင် တစ်ဘတ်၊ တလလျှင် ဘတ် သုံးဆယ်နှုံးဖြင့် တစ်ဦးချင်း အင်အားဖြင့် မဆိုသာ သော်လည်း အများအားဖြင့် စုပေါင်း လိုက်သောအခါ ကြီးမားသော မဟာ ကရုဏာရှင် အဖြစ် အင်အား ပြောင်းလဲ သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
သို့ပါသောကြောင့် အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် အနေဖြင့် တစ်ဦးချင်း မဟာ ကရုဏာရှင် များအဖြစ် ခံယူကြ ပါရန် ကြည်လင် အေးမြသော မေတ္တာ ရှေ့ထားပြီး အသိပေး တိုက်တွန်း အပ်ပါသည်။
· တို့တွေပေးတဲ့ ခြုံစောင်လေးကြောင့်
· တို့တွေပေးတဲ့ စာအုပ်လေးကြောင့်
· တို့တွေကူတဲ့ ဈာပနလေးကြောင့်
· ပီတိမျက်ရည် ရင်မှာသီလို့
ရင်ငြိမ်းပန်းဆိုသော အမည်မှာ တစ်သီး ပုဂ္ဂလ ပိုင်ဆိုင်သော အမည် မဟုတ်ပါ။ ပန်း ဆိုသည်မှာ မည်သူ့ အပေါ်တွင် မဆို သဘာဝ အတိုင်း သင်းပြန့် မွှေးမြ စေသည်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ ပန်းကလေး များသဖွယ် လူသား တိုင်း၏ နှလုံးသား များဝယ် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ရန်သူ၊ မိတ်ဆွေ မရွေး လူသားတိုင်း အပေါ်တွင် သင်းပြန့် မွှေးမြစေသော စေတနာ ကရုဏာ ပန်းကလေးများ ပွင့်လန်း စေချင် ပါသည်။ မိမိ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ နှလုံးသား များမှ စေတနာ ကရုဏာ ပန်းကလေး များဖြင့် လူသား များရဲ့ ရင်ထဲမှ အပူမီး များကို ငြိမ်းသတ် အေးချမ်း စေသော ရင်ငြိမ်းပန်း ကလေးများ အဖြစ် လူသားများကို မြင်ချင်လှ ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာ သားများ အားလုံး ရင်ငြိမ်းပန်း ကလေးများ ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြု လိုက်ရပါသည်။
ရာသက်ပန် အသင်းဝင်တို့၏ ခံယူချက် နှလုံးသား
(၁) ကျွန်ုပ်တို့သည် အထူး အခွင့် အရေးကို လိုချင်၍ မဟုတ်ပါ။ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ ရောက်နေသူ တို့ကို လူသား အချင်းချင်း ရိုးသား ဖြူစင်စွာ ကူညီ ရိုင်းပင်း လိုသော ဆန္ဒ ဖြင့်သာ ၀င်ရောက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(၂) တစ်ဦးချင်း ငြိမ်းချမ်းမှု မှသည် ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းရေး အထိ မိမိ တတ်နိုင်သည့် မည်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ကိုမဆို တက်ကြွစွာ ပါဝင် ဆောင်ရွက် သွားမည်။
(၃) ကျွန်ုပ်တို့၏ အမြင့်မားဆုံး ခံယူချက်မှာ အဝေးရောက် ညီအစ်ကို မောင်နှမ များ၏ တူညီသော ခံစားချက် အရ မိကွဲဖကွဲ သားကွဲ မယားကွဲဖြင့် ရှာဖွေ ထားရသော ချွေးနှဲစာ ဖြစ်သည့် ဤ တစ်နေ့ တစ်ဘတ် ထည့်ဝင်ငွေ အလှူ ဒါနဖြင့် ကူညီသော စာနာ ထောက်ထားမှု စေတနာ ကရုဏာ ပြယုဂ်သည် ကမ္ဘာမြေ အနှံ့ စိမ့်ဝင် ပြန့်နှံ့ စေပါလျှင် လူသားများ ကြားထဲမှ လူသား တစ်ယောက် အဖြစ် ရပ်တည် ရှင်သန် နေထိုင် ရကျိုး နပ်ပါသည်။
ဤသည်ပင်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရိုးသားသော ခံယူချက် ဖြစ်ပါသည်။
(၁) ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်အားဖြင့် ရရှိသော ငွေကြေးကို အမြင့်မြတ်ဆုံး ဒါန အဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး ဘ၀တူ အလုပ်သမား များ၏ အခက်အခဲ များကို အစွမ်းကုန် ကူညီ ဖြေရှင်း ပေးရန်
(၂) တစ်နေ့ တစ်ဘတ်ဖြင့် လူမျိုး ပေါင်းစုံ၊ တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ တို့၏ စုစည်းမှုသည် ငွေကြေး စုစည်းမှု အသွင်မှ စိတ်ဓာတ် စုစည်းမှု အသွင် သို့ ကူးပြောင်း သွားစေသည့် အတွက် လူမျိုး ခွဲခြားမှု၊ ဘာသာ ခွဲခြားမှု လျော့ပါး သွားစေရန် နှင့် ကမ္ဘာ မြေကြီး ငြိမ်းချမ်း သာယာ စေရန်
(၃) တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ များပြားလာ နေသော ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာ လုပ်သား ဦးရေ ကြောင့် လက်ခံ ထားရသော ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ၀န်ထုပ် ၀န်ပိုးကို မိမိတို့ နိုင်ငံသား များမှ တာဝန် သိစွာ စည်းကမ်း စနစ်တကျ နေထိုင် စားသောက်ခြင်း နည်းဖြင့် တတ်နိုင်သည့် ဘက်မှ ကူညီ လက်တွဲ ပံ့ပိုး ပေးရန်
သည်ဘလော့မှာ ဘယ်ကဏ္ဍကို စိတ်ဝင်စားလဲ
ကလေးများအတွက် ဘယ်ကဏ္ဍကို စိတ်ဝင်စားလဲ
HRDထဲမှာ ဘယ်ကဏ္ဍကို စိတ်ဝင်စားလဲ
Online ပေါ်က စာကြည့်တိုက်လေးများ
ခရိုင်မှူး. နောက်ဆုံးထုတ် အမိန့်အပေါ်ထင်မြင်ချက်များ...